Linn Ko: June 2013
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ အရောင်တူတဲ့စိန်လေးတွေကို ရွေးပေးရတဲ့ဂိမ်းလေးပါဗျာ..
ကောင်မလေးတွေ အသည်းစွဲပေါ့ဗျာ…အခုတော့ ဒီဂိမ်းကို
Posted by Linn Ko at 6:34 PM No comments:
ဂိမ်းအကြီးကြီးတွေ ဆော့ရတာ ပင်ပန်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဂိမ်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ..
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပေါ့ဗျာ…
Posted by Linn Ko at 6:14 PM No comments:
Window styleလေးသုံးကြည့်ရအောင် Launcher 8 ပါ လန်းပါတယ်
Windows ဖုန်းတွေခေတ်စားလာတော့ ကိုယ့် Android လေးကို Windows Style လေးပြောင်းသုံးကြည့်ရအောင် ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ရအောင်------ ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ
Posted by Linn Ko at 5:06 PM No comments:
Flash Gordon v1.2 for Android(Flash Zip Without Recovery)
Android ဖုန်းကလိနေကျသူတွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့် Application တစ်ခုပါ။ ဘာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ Flashable Zip တွေကို Clock WorkMod Recovery ကနေ၀င်ပြီး သွင်းစရာမလိုဘဲ Flashable Zip ဖိုင်ကို ဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲထည့် ဒီဆော့ဝဲထဲဝင် ပြီးရင် ခုနကတုန်းကထည့်ထားတဲ့ Zip ဖိုင်လေးကို
Posted by Linn Ko at 10:16 AM No comments:
အခုပေးမယ့် Application လေးကို Android ဖုန်း/Tablet သုံးစွဲသူတိုင်းကြိုက်မှာပါ။ ဒီ ဖုန်းဆော့ဝဲလေးက ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ Google Play မှာ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုသူက တစ်နေ့တစ်ခုနှုန်းနဲ့ Free ပေးပါတယ်။ Cracked လုပ်ထားတဲ့ app တွေကိုပေးတာမဟုတ်ဘဲ သူဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကို
Posted by Linn Ko at 10:06 AM No comments:
Fruit Ninja vs. Skittles®, Fruit Ninja vs Skittles v1.0.0 isaplace where dreams come true and legends are made. Words cannot describe how awesome it is, but we’re going to try anyway.
Posted by Linn Ko at 5:09 PM2comments:
Huawei & Other မြန်မာစာ၊မြန်မာစာလက်ကွက်သွင်းခြင်း
Sony မြန်မာစာ၊မြန်မာစာ လက်ကွက်သွင်းခြင်း
Android 2.3 Google App Installing,
Posted by Linn Ko at 4:54 PM 1 comment:
MobileGo ဆိုတာနဲ့ တော်တော်များများသိမှာပါ Mac OS X အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ
Android ဖုန်း ၊ Tablet တွေကိုဆော့ဝဲသွင်းခြင်း ၊ သီချင်းသွင်းခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံထည့်ခြင်း ၊ Ringtone ထည့်ခြင်း ၊ Android ဖုန်းထဲက ဆော့ဝဲတွေ ၊ ဖုန်း Contact တွေကို Backup ပြန်လည်ရယူခြင်း စတဲ့ Features တွေကို
Posted by Linn Ko at 4:35 PM3comments:
Posted by Linn Ko at 2:13 PM No comments:
ကျွန်တော် အခုပြောမယ့် ဟာကို သိပြီးသား သူတွေ ရှိသလို မသိသေးတယ့် သူတွေလည်း ရှိမှာပါ...
မသိသေးတယ့် သူတွေအတွက်လို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်...
ဘာလည်းဆိုတော့ 1Mobile Market က Application တွေကို ကွန်ပြူတာကနေ ဝင်တယ့် နည်းလေးပါပဲ..
Posted by Linn Ko at 2:03 PM No comments:
Touch တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ဖုန်းကိုသုံးစွဲရလေးလံစေမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးကိုအပျောက်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ 1Tap Cleaner Pro v2.20 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးက ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့
Posted by Linn Ko at 12:14 PM No comments:
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ အမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲပေါင်းပြီး
Long Length ဗီဒီယိုတစ်ဖိုင်းတည်းအဖြစ်ဆက်ပြီး
Posted by Linn Ko at 10:25 AM No comments:
ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် အခြားတစ်ယောက်ရေးထားတာကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဆိုတာကို ဝန်ခံချင်ပါတယ်
ခင်ဗျ.... ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကတော့ မစမ်းရသေးပါဘူး... ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ကျွန်တော် Galaxy Note ကို ICS Upgrate လုပ်ရင်း System ထဲကို မွှေရင်းနဲ့ အခု မြန်မာစာ
Posted by Linn Ko at 5:26 PM No comments:
ကဲ…..Launcher လန်းလန်းလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေ
အတွက်ပါဗျာ….ဒီ launcher လေးကတော့ Atom Launcher လို့ ခေါ်ပါတယ်ဗျာ…
ဘာတွေကောင်းသလဲတော့မမေးနဲ့ .... Size လည်း 6MB သာသာလေးရယ်ဗျာ…
Posted by Linn Ko at 4:34 PM 1 comment:
ဒီတစ်ခါတော့ လျှပ်စီးလို့ ပေါ့ပါးနေမယ့်
Lightning Launcher တဲ့ဗျာ…
Posted by Linn Ko at 4:16 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 4:09 PM No comments:
GangStar ဂိမ်းတွေဆော့ဖူးကျတယ်ဟုတ် … ဘော်ဘော်တို့
ခုလဲနောက်တစ်မျိုးထပ်ထွက်လာပြန်ပြီ Gangstar Vegas တဲ့
လန်းလန်းလေးဗျာ … ကျွန်တော်တော့ 1GB ကျော်ကျော်ကို အချိန်၂ရက်ပေးပြီးဆွဲလိုက်ရတယ်
Posted by Linn Ko at 2:21 PM No comments:
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဖုန်းထဲကို Message ၀င်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြား Application တစ်ခုခု (Facebook ကဲ့သို့) က Notification ၀င်လာတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ဖြစ်သွားစေမယ့်ဆော့ဝဲလေး LEDBlinker Notifications v4.6.6 for Android
Posted by Linn Ko at 2:10 PM No comments:
Mr Number (Block Unwanted Calls and Texts for Android)
Android OS အမျိုးအစားဖုန်းတွေအတွက် Call Blacklist ဆော့ဝဲအလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mr. Number-Block Calls, Texts v1.2.93 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲနဲ့ မိမိမ၀င်စေချင်တဲ့ဖုန်းတွေကို Block ထားမယ်ဆိုရင် ဖုန်းကတစ်ချက်တောင်ထမြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
Posted by Linn Ko at 1:28 PM No comments:
Android OS ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ Mobile Alarm System လေးပါ …. 26.Jun.2013- Latest version လေးပါ
Posted by Linn Ko at 1:16 PM No comments:
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် နာမည်ကြီးဂိမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bloons TD5v1.4 for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Bloons TD5ဂိမ်းထဲမှာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Tower တွေဆောက်လုပ်ရမယ်၊ ကိုယ်နှစ်သက်ရာအဆင့်မြှင့်တင်မှု တွေကိုရွေးချယ်ရမယ်၊ ထူးခြားပြီးထက်မြက်တဲ့ အထူး အေးဂျင့်
Posted by Linn Ko at 1:07 PM No comments:
ဒီဂိမ်းကိုတော့ တော်တော်များများသိမှာပါ သူကတော့ အရင်တုန်းက ကွန်ပျူတာအတွက်ဘဲ
ကစားလို့ရပါတယ် အခုတော့ စက်ရုပ်အတွက် ထွက်လာပါပီ ဂိမ်းအသစ်လေးပါ
Farm Frenzy3ဆိုတာနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ
Video ခိုးရိုက်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Secret Video Recorder Pro တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူကတော့ ဖုန်းထဲထည့်ပြီး ဆောစ့်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုလိုက်ရင် Background ကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်
ခိုးရိုက်ချင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံရေးအတွက် အများမသိအောင် မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ဖြစ်
Posted by Linn Ko at 11:10 AM2comments:
Firefox အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 25ရက်နေ အပ်ဒိတ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတွေကော ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကော ကို Browser တစ်ခု အနေနဲ့
လွှမ်းမိုးမှုကို ယခုထက်တိုင် အများဆုံးရယူနိုင်ခဲ့သူ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး.... ကဲ အသုံး
Posted by Linn Ko at 10:53 AM No comments:
ဒီဆော့ဝဲလ် လေးက တော့ Android ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း မသိသူ ရှားလှ ပါတယ် … ဖုန်းတိုင်းလိုလို မှာ ထည့်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး … ဒီဆော့ဝဲလ် လေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ Android OS စနစ်မောင်းနှင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က Task ဖိုင်တွေ ကိုရှင်းလင်းပေးတာဖြစ်တာကြောင့်
Posted by Linn Ko at 10:49 AM No comments:
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိတို့ဖုန်း ဘက်ထရီအားကုန်လွယ်မှာ စိုးရိမ်ရသူတွေ ကို ဖြေဖျောက်ပေးမယ့် DU Battery Saver Pro Update Version လေးဖြစ်ပါတယ် ….6လ (26) ရက်နေ့မှာ Update ထွက်ရှိလာတာကြောင့် ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ..မိမိဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီကို Saving လုပ်ပေးရုံတင်မကပဲ
Facebook ကိုမြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Application လေးပါ ကျွန်တော်တို့ ယခုလက်ရှိဖုန်းမှာ Default
ပါတဲ့ Facebook apk လိုမျိုးမဟုတ်ပဲ ထူးခြားတဲ့ အသွင်ပြင်ကို မြင်တွေ့ရမယ့် အပြင် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ
Background Themes တွေကိုလဲ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ....
Android Phone,Android Tablet အသုံးပြုသူများအားလုံး မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့်Application လေးဖြစ်ပါတယ်..CPU ကို Control ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ Device ကို လေးလန်ခြင်းမရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ
ကျနော်ပေးမှာလေးတွေက သူငယ်ချင်းများ အကြိုက်တွေ့မှာပါနော်
ရုပ်ထွက်ကော အသံပိုင်းမှာပါ ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူး...
လက်နက်တွေဝယ် ပြီး တိုက်ခိုက်ရတဲ့ဂိမ်းတခုပါ...
ပြေးရင်းခုန်ရင်း သေနတ်ပစ်ရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ.... အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ သူက ရုပ်ရှင်လဲရှိတယ်နော် ရုပ်ရှင်ကို အားလုံးကြည့်ဖူးကြမှာပါနော်.... ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ဆော့လို့ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်း ဆော့ပြီးမှ တင်ပေးတာပါ
Posted by Linn Ko at 1:02 PM No comments:
ဒီဂိမ်းကတော့ အကောင်တွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီးဆော့တဲ့ဂိမ်းလေးပါ
သေနတ်တွေလဲ Upgarde လုပ်လို့ရပြီးးးး
ကမ္ဘာ ပတ်ပြီး ဖဲရိုက်ရမှာပါ..
ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရှိသမျှ အသံအားလုံးကို ချိန်ညှိုလို့ရနိုင်မယ်
Posted by Linn Ko at 12:37 PM No comments:
RAM Manager Pro Version5လေးပါ.... Phone ကို ပိုမြန်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်... အခြား Website တစ်ခုဆီကနေတွေ့လာတာဆိုတော့ သူ့အတိုင်းလေးပဲ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လိုတယ့်သူတွေ Download လုပ်သွားလိုက်ပါနော်.... လာလည်တာ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း.....
ကစားစေချင်တယ့် စေတနာနဲ့ ရှာတွေ့တာလေး တင်ပေးလိုက်တာပါ... ကျွန်တော် တော့ မကစားကြည့်ရသေးပါဘူးဗျာ... စမ်းသပ် ကစားချင်တယ့်သူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါနော်...
အောက်မှာတော့ ဂိမ်းအကြောင်းလေးတော့ ဖတ်ကြည့်ဦးပေါ့.....
Posted by Linn Ko at 11:19 AM No comments:
ညီလေးညီမလေးတွေအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်.. ဒီဆော့လေးကို ကိုယ့်ဖုန်းရယ် ကိုယ့်ရည်းစားဖုန်းရယ်မှာ ထည့်ထားရင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြမယ်နော်... ဒီကောင်လေးနဲ့ ပို့ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံကိုဖွင့် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာလေးရေး (ဘယ်လိုရေးရမလဲမသိရင် ကိုကို ကျမကိုလာခိုးပါ လို့ရေး ) ပြီးရင် Hide
Posted by Linn Ko at 11:02 AM No comments:
ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်း ရိုးနေသူတွေက် စက်ဘီးပြိုင်ဂိမ်းလေးပါ
ဒီဂိမ်းက ရုပ်ထွက် ကြည်လင်ပြီး MB လည်းနည်းတော့ သူငယ်ချင်းတို့အကြိုက်တွေ့မယ်ဂိမ်းလေးပါ
Posted by Linn Ko at 10:57 AM No comments:
Lucky Patcher Application လေးပါ... Android Market တွေကနေ Install လုပ်လို့ မရတယ့် Application တွေကို Patch လုပ်ပေးတယ့်ကောင်လေးပါ... License Verion ဖြစ်အောင် လုပ်တာလို့တော့ ဆိုထားပါတယ်... သေချာတော့ မသုံးဖူးပါဘူး...သူ့ကိုသေချာ
သုံးဖူးလို့ ဖြစ်ဖြစ်.. စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာ Download
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ရဲကားတွေနဲ့ ပြိုင်ဖိုက်ရမှာပါ.. Need for Speed နဲ့ ဆင်ပါတယ်
ရုပ်ထွက်လည်းလန်းပါတယ် .. ဆိုက်လည်းသေးပါတယ်..
Posted by Linn Ko at 10:41 AM No comments:
ကြက်တွေကိုလိုက်ရှင်းရတဲ့ ဂိမ်းလေပါ… တောကြက်ပစ်ချင်ကစ်လိုက်တော့
ကျနော်တို့ အရင်က ဂိမ်းစက်လေးတွေမှာ ဆော့ခဲ့ကြတဲ့ဂိမ်းလေးပါ….
Disney ကထုတ်လိုက်တဲ့ ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Where’s My Water လိုမျိုးပဲ မိကျောင်းနေရာမှာ Disney ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ Mickey, Goofy အစရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Where’s My Water နဲ့ဆင်ပေမဲ့ ကစားရတာ ကွာခြားသွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 10:31 AM No comments:
25 ရက်နေ့မှာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ CCleaner လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မိမိတို့ကွန်ပျူတာ သန့်၇ှင်းေ၇းလုပ်ပေးဖို့အတွက် ဒီကောင်လေးကို မဖြစ်မနေသုံးစွဲသင့်ပါတယ်
Posted by Linn Ko at 10:10 AM No comments:
တရုတ်ဖုန်း/Tablet တော်တော်များများကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Shuame Root v1.2.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်ထုတ်ဖုန်း/Tablet တွေတင်မဟုတ်ပါဘူး ၊ အခြား LG/HTC/Samsung စတဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများကိုလည်း ဒီ Tool လေးကိုအသုံးပြုပြီး Root လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Root လုပ်ရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး ။ Bootloader Mode ထဲဝင်တာတို့ ၊ Recovery Mode ထဲဝင်တာတို့ ၊ ဖုန်းရဲ့ Pattern Lock ကိုဖြုတ်တာတို့ကိုပါလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။Shuame Root v1.2.1 ကိုအောက်က Link
Posted by Linn Ko at 10:01 AM No comments:
Root Call Blocker Pro အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 6လပိုင်း 24ရက်နေ့ထွက်လေးပါ
မိမိတို့ဖုန်းမှာ လက်မခံချင်တဲ့ဖုန်း Call နဲ့ Massages တွေကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ Root Call Blocker Pro လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Spam Call & Massages တွေကို လုံးဝတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အပြင်
Posted by Linn Ko at 5:19 PM No comments:
ဖိုင်တွေ၊ Folder တွေကို အထူးပြု Software တွေသုံးပြီး ပြန်လည်ရယူလို့မရအောင် အပြီးအပိုင်ဖျက်ပေးမယ့် File Terminator ပါ။ ကွန်ပျူတာကို upgrade လုပ်လို့ အသုံးမလိုတော့တဲ့ Hard Disk …. ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေပါရှိတဲ့ Hard Disk ဆိုရင်မပေါ့ဆပါနဲ့။ ဖိုင်ကဖျက်ပြီးသားပါ (Recycle Bin
Posted by Linn Ko at 1:17 PM No comments: